စင်ကာပူမှာသာတဲ့လ | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Opinion » စင်ကာပူမှာသာတဲ့လ
Wed, 2018-06-13 20:51
လ၏ သဘောက အမှောင် ကိုခွင်းကာ အလင်းရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၏ နိမိတ် ပုံလည်း ဖြစ်သည်။ အေးမြခြင်း အသရေကိုလည်း ဆောင်သည်။ စင်ကာပူမှာ လသာခဲ့ပါသည်။
နှစ်ပေါင်း များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု၏ ရာထူးလက် ရှိ သမ္မတနှင့် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်တို့ စင်ကာပူတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည့် သတင်းက ကမ္ဘာတစ်လွှားစိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးသတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ သည်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ် နယ်ထရန့်နှင့် မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်တို့၏ သမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံမှုက ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်ပေါ်က တောင်၊ မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခတွေ ချုပ်ငြိမ်းပြေလည်နိုင်ရေးသာမက ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် ကျိန် စာဖြစ်နေသည့် နျူကလီးယား လက်နက်ပြဿနာကိုပါ ဖြေရှင်း ဖို့ လမ်းစဖြစ်သည်ဟု တစ်ကမ္ဘာ လုံးက ရှုမြင်နေသည်။
ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ တွေ့ ဆုံမှုအပေါ် အချို့က အကောင်း မြင်ကြသလို အချို့ကလည်း သံသယဖြင့် စောင့်ကြည့်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ သမ္မတ ထရန့်အပေါ် ယုံကြည်မှုအားနည်းသလို ကင်ဂျုံအန်အပေါ်မှာလည်း မယုံကြည်ရဲ ကြသူတွေရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများ စွာအတွင်း ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ် လာတော့မလို မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးလိုက်၊ ခဏနေလျှင် ထိုမျှော် လင့်ချက်တွေကို ရိုက်ချလိုက်လုပ် တတ်သော မြောက်ကိုရီးယားအ ရေးအတွက် သံသယတွေထားနေ ကြသည်ကလည်း ထူးတော့ မထူးဆန်းပေ။ တစ်ဖက်တွင်လည်း သမ္မတ ထရန့်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲကျင်းပမယ်ပြောလိုက်၊ ပြီးခဏ နေ ဆွေးနွေးပွဲကို ဖျက်သိမ်းတယ် လို့ စာပို့၊ နောက်သိပ်မကြာခင်မှာ ပဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မူလအစီ အစဉ်အတိုင်း ပြန်လုပ်မယ် ပြော လိုက်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို မျက်လှည့်ပြ နေသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်နေပြန်သည် မဟုတ်လား။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကာမူ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ "Better than anybody could have expected (လူတိုင်း မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေခဲ့တယ်)’’ဟူသော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုအပေါ် သုံးသပ် ချက်ကို လက်ခံခဲ့ကြရသလို မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်၏ ‘‘Decided to Leave the past behind. The World will see the major change. (အတိတ်ကို ချန်ထားပစ်ခဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက အပြောင်းအလဲကြီးတွေကို တွေ့ရမှာပါ)’’ဟူသော ကတိစကားကိုလည်း ရင်ဖိုခဲ့ကြရသည်။
ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ တွေ့ ဆုံမှုအပြီးတွင် သဘောတူညီမှု တစ်ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ သည်။ အမေရိကန်က မြောက်ကို ရီးယား၏ လုံခြုံရေးကို အာမခံ ချက်ပေးသလို မြောက်ကိုရီးယား က နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက် သိမ်းဖို့ ကတိပြုသည်။ နှစ်ဦးနှစ် ဖက်စလုံးအတွက် အရေးအကြီး ဆုံးလိုလားချက် (Needs) တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းဟု ဆိုနိုင် သည်။ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ် ရာတွင် ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်သူဈေး နှုန်းတစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်သာ ညှိနှိုင်းနေလျှင် အဆင်ပြေချင်မှ ပြေမည်။ တစ်ခါတစ်ရံဝယ်သူက ဈေးနှုန်းကို မကြောက်။ ကြိုက် ဈေးပေးကာဝယ်နိုင်သည်။ သို့ သော် အိမ်အရောက်ပို့ပေးဖို့ လို လားနိုင်သည်၊ အချိန်မီပို့ဖို့ လိုအပ်နိုင်သည်။ ရောင်းသူဘက်ကလည်း ဈေးနှုန်းများများရဖို့ ပိုအဓိကကျ သည်။ အိမ်အရောက်လည်း ပို့နိုင် သည်၊ အချိန်မီဖို့လည်း တာဝန်ယူနိုင်သည်ဆိုလျှင် အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်နိုင်သည်။ သည်လိုမဟုတ်ဘဲ ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်သူကြားဈေးနှုန်းတစ်ခုတည်းကို အခြေတည်ဆွေး နွေးနေလျှင် အရောင်းအ၀ယ်မ ဖြစ်နိုင်။ နိုင်ငံရေးမှာလည်း သည် လိုပင် ဖြစ်မည် ထင်သည်။ ဆွေး နွေးညှိနှိုင်းဖက်များ၏ အဓိကလို အင်တွေကို တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်အပြန်အလှန်သိရှိနားလည်ကြရ မည်။ တစ်ဖက်အတွက် အရေးကြီးသည့်အရာက အခြားတစ်ဖက်အ တွက် အရေးကြီးချင်မှကြီးမည်။ လိုက်လျောနိုင်သည့်အရာဖြစ်နိုင် သည်။ သည်လိုအခြေအနေကို ရှာဖွေကာ စတင်ဆွေးနွေးဖို့ လို သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ယုံကြည်မှု တွေ ပိုမိုတည်ဆောက်လာနိုင်ကာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည့် သဘောတူညီ ချက်တွေကို ရှာဖွေနိုင်ပေလိမ့် မည်။ အမေရိကန်အတွက် အ ရေးအကြီးဆုံးက ကိုရီးယားကျွန်း ဆွယ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ မြောက်ကိုရီးယား၏ အဓိကလိုလားချက်က နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ရေးမဟုတ်။ ကမ္ဘာကြီးက သူ့ကိုအလေးထားဖို့ဖြစ်သည်ဟု ထင်သည်။ ကမ္ဘာကြီး က သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးအာမခံချက်ရှိဖို့ ဖြစ်သည်။ သည့်အတွက် နျူကလီးယားလက်နက်ကိုအသုံးပြုခြိမ်းခြောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထရန့်နှင့်ကင်တို့၏ သဘောတူညီချက်က နှစ်နိုင်ငံလုံး၏ အကျိုးစီးပွားဆုံမှတ်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် သူတို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ အကျိုးစီးပွားဆုံမှတ်လည်း ဖြစ်သည်။ ထရန့်က ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တည်ငြိမ်ရေးစွမ်း ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်သွားသလို ကင်ကလည်း ကမ္ဘာကြီး၏ အကောင်းမြင်မှုကို သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။တစ်ဖက်တွင်လည်း ထရန့် နှင့် ကင်တို့၏ သဘောတူညီချက် အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေရှိနေကြသည်။ သူတို့၏ သဘောတူညီချက်က အပေါ်ယံဆန်သည်။ အနှစ်အ သားမပါ။ မြောက်ကိုရီးယားလုံခြုံ ရေးကို အမေရိကန်က အာမခံ သည်ဟု ဆိုသည့်တိုင် မည်သို့အာ မခံမည်နည်းဆိုသည့် အချက်မ ပါ။ နျူကလီးယားလက်နက်တွေ ဖျက်သိမ်းဖို့ မြောက်ကိုရီးယားက သဘောတူညီသော်လည်း ဘယ် တော့အပြီးဖျက်သိမ်းမည်ဟူ၍ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိ။ ဆိုလိုသည်က ဒီသဘောတူညီ ချက်သည် ဘာဆိုဘာမှ မဟုတ်သလို ဖြစ်နေသည်။ အမေရိကန်က မြောက်ကိုရီးယားကို ခြိမ်းခြောက် မှုတွေ လုပ်နိုင်သလို မြောက်ကိုရီး ယားကလည်း လက်နက်တွေ ဖျက် သိမ်းရေးအချိန်ဆွဲနေနိုင်သည်။ သည့်တွက် သတိချပ်သင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့ခြင်းက မထိမတွေ့ဘဲအဝေးမှ ရန်စောင်နေခြင်းထက် ပိုကောင်းသည်။ အငြင်းပွားနေခြင်းထက် သဘောတူညီမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိခြင်းက ပို၍ကောင်းသည်ချည်းပင်။
စိတ်ဝင်စားစရာနောက်တစ် ချက်မှာ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်း ဆောင်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတတို့ ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုအပေါ် တရုတ်၊ ရုရှားတို့က ဘာမျှမှတ်ချက်မပေး ခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်ဆိုလျှင် မြောက်နှင့် တောင်ကိုရီးယားနှစ် နိုင်ငံကွဲရခြင်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီး အမေရိကန်နှင့် ရုရှားတို့ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုဝိုင်းပြီး အမဲဖျက်ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ် သည်။ မြောက်ကိုရီးယားကို တစ် ချိန်လုံးနောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးပေး နေသည်က တရုတ်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှင့် အဆင်ပြေသည့် နိုင်ငံအတော်များများက တရုတ် နှင့် အဆင်မပြေ။ သည်တစ်ကြိမ် တွင်တော့ အမေရိကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့ ရွှေလမ်းငွေလမ်း ဖောက်သည့်အတွက် တရုတ်ကြီး က မနာလိုဟန်လည်းမပြ။ နောက်ကွယ်ကပင် ပံ့ပိုးပေးနေသည်။ သည်အချက်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည်။ မည်သို့ဆို စေကာမူ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် တည်ငြိမ်မှုကို တရုတ်ကလည်း လိုလားသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ဒါသည်လည်း ကောင်းသည့် လက္ခဏာပင်။
လ၏ သဘောက အမှောင် ကိုခွင်းကာ အလင်းရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဆိုပါလျှင်၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ၏ နိမိတ်ပုံဖြစ်သည်ဆိုပါလျှင်၊ အေးမြခြင်းအသရေကိုဆောင် သည်ဟု ဆိုပါလျှင် စင်ကာပူတွင် လသာခဲ့ပါသည်။ သည်လမင်း သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲက ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို ထွန်း လင်းတောက်ပလာစေနိုင်ပါ သည်။ သည်လမင်းသည် ကမ္ဘာ ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လည်း မျှော်လင့်ခြင်း အလင်းရောင်ဖြစ်ပါ သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်း သည်က လမင်းတွင် အဆန်း၊ အဆုတ်ရှိသလို လပြည့်ည၊ လမိုက်ညတွေလည်း ရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတိမ်ညိုဖုံးသလို တစ်ခါတစ်ရံလည်း ငပုပ်ဖမ်း တတ်ပါသည်။ လမင်း၏ အလင်း ရောင်ဆက်လက်ထွန်းလင်းဖို့ အားလုံးက မျှော်လင့်နေသလို လ မိုက်ညတွေရှိနိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုအပ်ပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ စင်ကာပူမှာ လသာခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းစစ် ကို နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကြာအောင် တိုက်လာခဲ့သော တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများအားလုံး မြန်မာပြည် သူလူထုအတွက် လမင်းအလင်း ရောင်ကို အမြန်ဆုံးဆောင်ကြဉ်း ပေးစေချင်ပါသည်။ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် စိုင်းထီးဆိုင်၏ သီချင်းစာသားဖြစ်သည်။ ‘ရန်ကုန်မှာလည်း လသာလျက်ပါပဲ’ဆို သလို ‘မြန်မာပြည်မှာလည်း လ သာနိုင်ပါတယ်’ဟု မော်ကြွားချင် မိသည်။
စင်ကာပူမြေပေါ်က အမေရိ ကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင် ငံ၏ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီး တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရန့်က ‘‘Anyone can make war, but only the most courageous can make peace. (စစ်ဆိုတာ ဘယ်သူမဆို တိုက် နိုင်ကြတာမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ သတ္တိအ ရှိဆုံးဆိုတဲ့ သူတွေသာ ငြိမ်းချမ်း ရေးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ကြ တာဖြစ်ပါတယ်)’’ဟု ဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာ့မြေမှာ လမင်းအလင်းရောင်ကို မြင်ရဖို့ သတ္တိရှိကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။။